Ogaden News Agency (ONA) – Faallo: Jaamacadda Jigjiga Maxay Usoo Kordhisay Dadka & Dalka Ogadenya? By: Xaaji M/rashiid
Faallo: Jaamacadda Jigjiga Maxay Usoo Kordhisay Dadka & Dalka Ogadenya? By: Xaaji M/rashiid
Naftood-hurayaal- Maalkood-hurayaal iyo Maskaxdood-hurayaal waxaan idiin soo gudbinayaan Faallo ku saabsan Jaamacadda looyaqaano Jigjiga University oon doonayo inaad ila wadaagtaan. Marka hore waxaad ogaataan Jaamacada Jijiga waxaa dul saaran su’aalo dhowr ah. Waxaase iila muhiimsan su’aal ah waa maxay sababka wax loo bartaa? jawaabta hadaan soo koobo waxaa weeye in ruuxu naftiisa anfaco oo uu isku filaasho gaadho. Waxaa kaloo wax loobartaa inaad bulshada aad lanooshahay u gudbiso wax kamid ah nafciga wixii aad soo baratay iyo inaad wax cusub kusoo kordhiso horumarinta bulshada adigoo adeegsanaya aqoontaada.
Jaamacadan oo la’aas aasay 2006 oo Toban sano foodda sii galinaysa isla markaana noqotay mid loo adeegsado Saxaafadda iyo qaabka xayisiiska ayaa waxay hoos tagtaa oo si toos ah u maamula Federaalka ama dawladda dhexe ee Itoobiya. Ardaydu waxay ka koobanyihiin dhamaan waxa loogu yeedho Kililada. Inkasta oona xog rammi ah kahayn tirada ardayda ee dhigata, hadana waxaan aaminsanahay inay qowmiyadaha ugu yar ay soomaalidu noqon karto. Gabadh la waraystay 2012 oo goobta dhigata waxay sheegtay inay gabdhaha soomaalidu yihiin 30. Mayna sheegin tirada wiilasha hadaanse qiyaaso waxay noqon karaan markaan sadex jibaaro tirada gabadhaha waana 90 kamana badan karaan. Waxaa halkaa kasoo baxaya in miisaaniyadii waxa looga yeedho Kilil 5 ee dhanka wax barashada qaab casriyaysan loogu maal galiyay qowmiyado kale. Wiil soomaali ah kana mid ah ardayda oo la waraysatay ayaa isna cadeeyay in meesha ay wax ka bartaan dhamaan qowmiyadaha oo dhan.
Hadaynu isla garanay in xaalku yahay qowda maqashii waxna ha uqaban aan u daadego markay qalin jabiyaan. Ardayda kasoo jeedda qowmiyadaha kale markay wax barashada dhamaystaan qorshaha uguma jirto inay ka hawl galaan Goday, Wardheer iyo gobolada kale ee soomaalida. Caqliga saxda ahi waxuu inoo sheegayaa inuu arday waliba ku laabanayo Gobolkiisa iyo meelihii uu kayimid. Waxaa sidadaas ku khasaaray gobolkii somalida ee dhaqaalahoodii wax lagu bartay kadibna laga talaabsaday. Kuwa soomaalida ah ee tirada yar markay meesha kasoo baxaan waxaa horyaala laba daran mid dooro- waa tan horee, inay la shaqeeyaan Gumaystaha oy karaamo aduun iyo mid aakhiraba sidaa ku seegaan iyo inay ka fakaraan siday u baxsan lahaayeen intoodii Damiir ku hadhay, mar hadayna jirin shaqo loo hayo oy toos ugalaan iyo mid ay u madax baanyihiin toona. Sidaa daraadeed waxaan akhristayaasha waydiinayaa wax badan baad maqsheen in jaamacadda Jigjiga laga qalin jabiyee, Miyaad maqasheen ama aragteen wax ay qabteen ama ay soo kordhiyeen?
Dadka ku doodaya itoobiya waxbay inoo qabatay dhanka waxbarashada oo jaamacad ayay inoo sameysay miyayna ku baraarugsanayn inay jireen dhalinyaro Somalida Ogadenya ka dhalatay oo jaamacado kasoo baxay. Markii soomaaliya laga soo qaxay 1991 waxaa dalkeena soo buux dhaafiyay Aqoonyahan jaamacado kasoo baxay. Hadaan soo qaato Tusaale buuran- Waxaa kamid ahaa Marxuum: C/laahi Sacdi, Marxuum: Sheekh Ibraahim Cabdalla iyo Marxuum: Maxamed Siraad Doolaal. Xagay noloshoodii ku dhamaysteen oo lagu wada xabaalay? Haday Dawlada dhexe ee Itoobiya doonayso Jaamici ree Ogadenya ah maxay u qixisay ragaas? Maxay galabsadeen? Ma intay Maqale tageen ayay soo gubeen Beero Tigreegu lee yahay? Jawaabta oo kooban dawladda Itoobiya Gambo iyo Caantayn Dadkaa mayna uqaban maarkaan ka hadlayo dhanka waxbarashada.
Halista ka iman karta dhaliyarada ay sheegteen inay wax bareen qaarkoodna ay Maqale u direen ayaan ku tilmaami karaa dagaal noocii ugu xumaa ee umad lagu qaado waana midka dhalanrogga Maskaxda oo ah inay soo saarayaan nooc Liyuu Police ah oo Qalinka kula dagaalama Gobanimadoonka Ogadenya ee goor walba u taagan soo celinta karaamada umadeena! Dhanka kale itoobiya waxay Xabsiyada ka buuxusay Geeljirihii kadib markay ogaatay inay Qalbiga ka necebyihiin ee muxuu yahay kan kale ee wax labarayo- sow ma aha inay tabcanayso Dadkii maskaxdeeda ku shaqyn lahaa isla markaana fulin lahaa danaheeda gaarka ah?
IGA GUDOOMA 2 HAL XIDHAALE, KAN HORE ANAA KAJAWAABI KA DAMBANA IDINKA-
Waxaa jirtay hal xidhaale ay Caruurtu isticmaasho oo ah- Googaa? Xagalee- Xerada Adhigeenu waa wada God, God lagalana maleh? Waa Mareegaha Maqasha. Hadaba akhristayaal Googiin? waxaad sheegtaan Jigjiga waa wada Jaamici, Jaamicina maleh? Si kastaba ha ahaatee Jaamacadda Jigjiga ayaan wali lasoo sheegin dad ka qalin jabiyay oo Dadka iyo Dalka Ogadenya wax usoo kordhiyay, markii laga reebo inay Itoobiya u adeegsatay Dhanka saxaafadda, taasoo kadhigan in taageerayaasheeda Qurbajoogtu ay fadhi kudirirka la yimaadaan waxay dadka halganka taageera kula doodaan, iyagoo odhanaya bal eega waxbarashada wadankii kasocota.
Awal iyo aakhirba isku soo duuboo Gabagabada Faalladan ayaan kusoo xidhayaa ESTVga Jigjiga kabaxa ee caanka ku ah inuu biyo nooga dhigo Dhaan,Dabangaalaha ayaa sidoo kale doonaya inuu Aqoonyahan iyo Injineerro nooga dhigo Jawaasiis Koofiyado Dabaqyo ah madaxa loo soo saaray oo Aidisku hoosta ka qudhmiyay!
Fiiro gaar ah- Waxaa dhici karta inay jiraan Shaqsiyaad nadiif ka ah eedaha aan u xambaariyay Ardayda Jaamacadda Jigjiga, kuwaasi bar,tilmaameed uma aha Qalinkayga shiishkuna iima hayo ee sidaa hala ogaado.